Nzuko nke ndi Christian nke Chineke - WRSP
Chọọchị Ndị Kraịst nke Chineke chebere
CHRISTIAN CHRISTIAN EDLỌ NKE CHINEKE (RCCG)
CHRISTIAN CHRISTIAN AKW REKWỌ NKE CHINEKE
1909 (July5): A mụrụ Ogunribido Ogundolie Akindolie na nọmba 12 Odo-Alafia Street, Odojomu, Ondo State, Nigeria.
1927: Akindolie sonyeere ụlọ akwụkwọ Church Mission Society (Anglican Communion) iji nweta agụmakwụkwọ ọdịda anyanwụ. E mere ya baptizim n'otu afọ ahụ ma gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Josiah Olufemi Akindayomi.
1931: Akindolie hapụrụ Church Mission Society iji sonyere Cherubim na Seraphim Society ọhụrụ (C&S).
1941 (25 Julaị): Akindolie hapụrụ njem Ondo gaa njem ogologo gaa Ile-Ife, obodo dị kilomita iri isii site na ya ma lebara anya na cosmology nke Yoruba nke "etiti ụwa." bBee onye amụma C&S na Ile-Ife.
1941: Josiah O. Akindayomi lụrụ Esther Egbedire; Ha hapụrụ Ile-Ife gawa Legọs.
1948: Akindolie guzobere "Egba Ogo Oluwa:" Society for the Glory of God (Ekpere Mmekọrịta), nke ga-abụ ntọala nke a ga-ewu RCCG n'ọdịnihu.
1952: Akindolie chụpụrụ C&S maka nnukwu nnupụisi na maka ịchọrọ ịchọrọ onwe onye dịka onye isi ụka.
1952: Egbe Ogo Oluwa ghọrọ “Church of the Glory of God,” nke mechara gbanwee ka ọ bụrụ The Church Redeemed (Ijo Irapada).
1954: Chọọchị Redeemed nwere mmekọ na Apostolic Faith Mission nke South Africa (AFM) wee gbanwee aha ya na Mission Apostolic Mission.
1956: RAC gbanwere aha ya ọzọ na Apostolic Faith Mission nke South Africa (Alaka Nigeria). N’otu afọ ahụ, a gbanwere aha ahụ ọzọ ka ọ bụrụ Apostolic Faith Mission nke West Africa.
1960: Njikọ aka na AFM nke South Africa kwụsịrị n'ihi amụma ịkpa ókè agbụrụ nke ọchịchị South Africa. N’otu afọ ahụ, ọ gbanwere aha ya bụ The Redeemed Christian Church of God.
1975 (June 28): Akindayomi buru ụzọ gaa na mpụga Nigeria; ọ gara Tulsa, Oklahoma na US
1980 (November 2): Josiah O. Akindayomi nwụrụ na Lagos, Nigeria.
1980 (Disemba 6): E liri Akindayomi na olili ozu ọha Atan na Lagos.
1981 (Jenụwarị 20): Dr. Enoch Adejare Adeboye (b. March 2, 1942; sonyeere RCCG 1973), ghọrọ onye ndu nke RCCG mgbe mgba esiri ike.
2001 (Jenụwarị 10): Esther Akindayomi, nwanyị di ya nwụrụ nke Josiah Akindayomi, nwụrụ na Lagos.
Ọ bụ Reverend Josiah Olufemi Akindayomi, bụ “onyeozi” na potin nke Sacred Order of the Cherubim and Seraphim Church Movement (C&S) guzobere Churchlọ ụka Christian Redeemed Christian Church of God (RCCG) na 1952 na Ebute-Metta, mmiri mmiri na-asọ mmiri nke Lagos . A mụrụ Akindayomi na 1909 na obodo Ondo (ihe dị ka kilomita 250 site na Lagos) n'ime ezinụlọ nke ndị na-efe ofufe Ogun , ndi Yoruba Orisa ígwè na agha. Aha ya mgbe a mụrụ ya bụ Ogunribido (Ogun nwere ebe obibi) Ogundolie Akindolie; o tolitere wee bụrụ onye ama ama Babalawo (nna nke nzuzo / ihe omimi ma ọ bụ onye na-agba afa) na onisegun , nwoke omenaala, ya na onye oru ugbo. N'ihe dị ka afọ 1925, ọ gbanwere na Church Mission Society (CMS), nke bu ụzọ ụzọ Chọọchị Anglịkan na Nigeria, n'ọchịchọ ya maka ụdị agụmakwụkwọ ọdịda anyanwụ. E mere ya baptism wee were aha Josiah Olufemi Akindayomi. Ọ bụ ezie na ọ ka bụ Onye Kraịst mgbe niile, ọ kwenyesiri ike na chi na omume ndị Yoruba: “n'agbanyeghị na ọ nọ na CMS n'oge a, Josaya bụkwa onye na-eme ọgwụ herbal ( Babalawo ) ”(Olaleru 2007: 33, mesiri ike na mbụ). Eziokwu a mere ka ọdịdị nke ọchịchọ ime mmụọ ya n'ọdịnihu pụta ìhè.
Josiah Akindayomi nọrọ ihe dị ka afọ ise na Chọọchị Anglịkan, ebe, n'oge na-adịghị anya ọ hapụrụ ọchịchọ ya maka ịgụ akwụkwọ na ọdịda anyanwụ, tupu ịga n’ihu isonye na C&S n’ihe dịka 1931 n’ihi nzute ya na onye amụma nwanyị nke ụka ahụ bụ onye mechara bụrụ onye ndụmọdụ mmụọ ya. Dị ka ama ama onisegun , Akindayomi etinyela hex na agadi nwanyị onye amụma C & S ahụ maka itinye aka na azụmahịa ya. Ọ tụrụ anya na nwanyị amuma ahụ ga-ata agwọ (mystical) nke agwọ n'ihi nkọcha ọ kọchara ya. Ọtụtụ ụbọchị na izu gafere na ọ nweghị ihe ọdachi a na-atụ anya ya dakwasịrị onye amụma nwanyị ahụ. Akindayomi gara n'ihu gakwuru ya iji jụta isi iyi nke ike ime mmụọ ya iji gbochie ike ya dị omimi. Nwaanyị ahụ mesiri ya obi ike na ọ ga-echebe ya pụọ ​​n'ihe ọjọọ n'ihi ike nke ekpere gbara ya gburugburu. Nzute a mere ka ọ laghachi na CMS na C&S. Ọ bụ ezie na ọchịchọ maka nnweta na ngosipụta nke ike site na njikọ mmụọ siri ike nwere ike ịsị na ọ bụ ihe kpatara ngbanwe nke Josaya na C&S, ihe nzuzo ma ọ bụ nke dịpụrụ adịpụ nwere ike ịbụ afọ ojuju ya na enweghị isi, mmụọ, mmụọ na liturgy nke Anglịkan Chọọchị.
N’okpuru ọrụ onye amụma nwanyị meworo agadi ọ chọburu igbu, Akindayomi tolitere ngwa ngwa na nghọta ime mmụọ na nkuzi nke C&S. Na 1941, mgbe ọ mụchara ọrụ ya n'okpuru ndụmọdụ onye amụma nwanyị, Akindayomi hapụrụ ụlọ ezinaụlọ ya na obodo Ondo gaa Ile-Ife, bụ ebe a na-edebanye aha ya dịka onye amụma amụma. Ile-Ife bụ obodo dị mkpa na cosmology ndị Yoruba; a maara ya maka mkpa ime mmụọ ya dị ka etiti ụwa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ lụrụ nwa agbọghọ, Egbed Egbedire (ụbọchị mbụ nke Jenụwarị 10, 2001), onye bụ onye otu ọgbakọ ọgbakọ nke C&S. Mgbe alụmdi na nwunye ya na nrịgo ya n'ọkwá ọrụ nke woli (onye amụma) na C&S, ọ gara n'ihu na mbugharị nke mmụọ ya, oge a gaa Lagos. O kwuru na Chineke gwara ya ka ọ kwaga n'obodo a maka ozi oge niile ya. Na Lagos, ọ gara biri na ngalaba Mount Zion nke C&S, otu parish ahụ ebe otu onye n’ime ndị guzobere C&S bụ Moses Orimolade Tunolase duuru ọgbakọ tupu onye nke ikpeazụ anwụọ n’abalị iri na itolu nke ọnwa Ọktoba 19 (Omoyajowo 1933: 1982; Ukah 38: 2003). Onye nọchiri anya Tunolase, Abraham William Onanuga, nabatara ma gbaa Akindayomi ume, bụ onye mechara bụrụ onye amuma na onye na-agwọ ọrịa. N'oge na-adịghị anya aha ya dọtara obere ìgwè nke ndị na-eso ụzọ nke ọ haziri n'otu ìgwè ọmụmụ Bfible a na-akpọ Egbe Ogo Oluwa , Mmekọrịta nke Glory of God (GGF). Ọtụtụ n'ime ndị otu a bụ (ndị bụbu) ndị ahịa eritela uru site n'ekpere ọgwụgwọ nke onye amụma ahụ. N’oge na-adịghị anya Akindayomi bufere ọrụ GGF site na ụlọ ụka ụka C&S n’ụlọ nke aka ya, na-eme ka enyo anyị enyo na o nwere ebumnuche ịwepu C&S. Mgbe mbọ iji mee ka ọ kpọta GGF n'okpuru ikike nlekọta nke C&S dara ada, a chụpụrụ ya na 1952, ya na ndị otu niile nke GGF, maka nnupụisi siri ike nke mebere ikike ụka nke C&S.
Ntọala nke Churchka Christian Church nke Chineke gbapụtara bụ nsonaazụ nke ịchụpụ Akindayomi, ya na obere ndị otu ya, site na C&S na 1952. N'ịbụ ndị a chụpụrụ C&S, ọ mere ngwa ngwa eweghachi Glory of God Fellowship n'ime a chọọchị, ma gbanwee aha ahụ na Chọọchị Chineke nke Glory (Ijo Ogo Oluwa) (GGC). Na Naịjirịa, ọ dịla ogologo oge ndị "otu mkpakọrịta" n'ime nnukwu ụka dị iche iche na-enyoba anya n'ime ụka zuru oke, dị ka nke a mere na Precious Stone Society na Ijebu-Ode (otu ndị otu ekpere na Anglịkan Church) nke mebiri n'ime " Faith Tabernacle Church ”n’afọ 1922 (Ayegboyin na Ishola 1997: 65-69). GGC bụ ụka dịka nne na nna ya (C&S) n'ihe niile: nkuzi, liturgy na ethos, maka isi obodo ime mmụọ nke Akindayomi bụ nke enwetara na C&S. N'enyeghi afọ ojuju na aha ya ugbu a, na nhụjuanya nke nsogbu nke njirimara, GGC gbanwere gaa Churchka Redeemed (RC) (Ijo Irapada) mgbe e mesịrị na 1952. Ma ọzọ na 1954, RC gbanwere aha ya na Redeemed Apostolic Church (RAC), mgbalị nke gosipụtara n'ụzọ doro anya mkpali na nchekasị nke ndị malitere ịmalite ịmepụta aha dị iche na nke Aladura nne-ụka. Afọ anọ ka ebidoro ya, RAC chọrọ ma nwee mmekọ na Apostolic Faith Mission nke South Africa (AFM), nkewapụrụ iche, ụka White Mission Pentikọstal, nke John G. Lake na Thomas Hezmalhalch jikọtara ọnụ na 1908 (lee Heglesson 2006) ). Njikọ a bụ atụmatụ iji nweta nkwanye ùgwù yana iji gbochie nyocha na enyo na-enyo enyo site n'aka gọọmentị colonial nke Lagos bụ nke doro anya na enweghị obi iru ala na ụmụ amaala hiwere ọgbakọ Ndị Kraịst a ma ama. Site na mmalite nke njikọ aka na AFM, RAC gbanwere aha ya na Apostolic Faith Mission nke South Africa (Alaka Nigeria). Njikọ ahụ sitere na 1956 ruo 1960, ma ọ bụghị na-enweghị mgbanwe ọzọ nke aha n'etiti Missionolic Faith Mission nke West Africa. Emebi mmekọrịta nke AFM ahụ mgbe Nigeria nwetara nnwere onwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na Britain wee mebie mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọdịbendị na South Africa n'ihi amụma ịkpa oke agbụrụ nke ikpeazụ. Mgbe nkwenye na AFM, ụka ahụ mechara biri maka edelọ Nzukọ Ndị Kraịst nke Chineke (RCCG), aha ọ nọgidere na-enwe. Akụkọ ụlọ ụka na-ekwu na Chineke kpughere ya n'ụzọ dị omimi nye Akindayomi n'ọhụụ. Maka ụka ndị dị n ’ọhụụ, azịza nke izi ezi na-esitekarị n’enyemaka Chukwu; "Echiche mmekọrịta mmadụ na iwu bụ ihe dị mkpa… na-ekpebi ọganiihu nke mbido okpukpe" (Miller 2002: 440).
RCCG ghọrọ usoro nzukọ pentecostal dị mgbagwoju anya na Nigeria, ụka nke ọdịiche nwere ọtụtụ nkuzi, akwụkwọ akụkọ na akụkọ ihe mere eme na ihe ngosi (Adeboye 2007). O sitere na ụka Aladura, na-ekwusi ike banyere ekpere na ibu ọnụ na usoro mmụọ ndị ọzọ na njikwa nke nsogbu ndụ. (Aladura bu okwu ndi Yoruba putara “ndi nwe ekpere”). N’otu aka ahụ, ọ gbazitere ọtụtụ ihe site na chọọchị ụka Pentikọstal Oge gboo, dịka Assemblies of God Church (AOG), ụka anọ nke ụka ozigbo, AFM na ụlọikwuu Okwukwe. Kemgbe e guzobere ya, njirimara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke nkuzi agbanweela site n’otu afọ gaa na nke ọzọ; enwere ike ikwusi okwu ike na RCCG na-agbanwe (ihe dị iche iche, ozizi, usoro ọmụmụ na akụ na ụba) kwa afọ ise. Nnukwu mgbagwoju anya bụ otu ụzọ ụka si agbaso mgba na asọmpi na akụnụba. Iji mee ka nghọta ya dịkwuo omimi ma yie ka a na-asọpụrụ ya, RCCG zụlitere nkuzi nke ụka ndị ọzọ na-aga eto na gburugburu Pentikọstal gbara ya gburugburu; site na 1952 rue 1982, o were ma were Sunday School Manual nke AOG dika nke ya. Ọ bụ na 1982 mgbe ọ haziri nke ya n’okpuru onye nọchiri anya Akindayomi, Enoch Adejare Adeboye. N’afọ ndị 1970, RCCG kwụsiri ike na Akindayomi nwere ike ịmị mkpụrụ mbụ nke ndị gụrụ akwụkwọ. Na 1975, ọ gara Tulsa, Oklahoma, ịga nnọkọ mmaliteghachi nke Pentikọstal, ya na onye ga-anọchi ya, Enoch Adeboye. Nke ahụ bụ njem izizi ya na mpụga Naịjirịa. Na 1979, ọ kwụghachiri nleta ọzọ na USA maka mmemme yiri ya. Nleta ndị a na US gosipụtara mmalite nke nkuzi, usoro ọmụmụ na mmekọrịta mmekọrịta nke RCCG pụọ na ịdị nsọ mbụ ya ma ọ bụ ịjụ mmụọ ime mmụọ Pentikọstal nke ụwa ka ọ baa ọgaranya, ebe obibi nke ụwa, nke mmekọrịta akụ na ụba na nke akụ na ụba nke jupụtara n'okpuru Josaya nọchiri Na mgbakwunye na ịga leta USA, Josaya gara njem uka Jerusalem na Rome tupu ọnwụ ya.
Akindayomi nwụrụ na Nọvemba 2, 1980, mgbe afọ 28 nke ntọala, na-eduga ma gbanwee ụka Aladura na ụka Classical / Holiness Pentikọstal. Na chọọchị ahụ ọ tọrọ ntọala ma na-aga, a naghị anabata nnakọta ego n'oge ọrụ; e kewapụrụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke n’oge ofufe; A machibidoro ụmụ nwanyị iyi ihe ntecha na traụza, ha kwesịrị ikpuchi isi ha mgbe ha nọ na chọọchị. Nke ka mkpa bụ na ụmụ nwanyị etinyeghị aka n'ọchịchị ọ bụla ma e chipụghị ha ndị ozuzu aturu ma ọ bụ ndị dikọn. Mmetụta ofufe, mmụọ nsọ, ofufe a na-eme kwa izu bụ nke ndị otu nọ na-ebe akwa ma na-ebe akwa maka ogologo oge mere ka chọọchị ahụ nwee nkwalite ugwu abụọ: "ụka na-ebe ákwá" (Ijo elekun) na "ụka nke ndị na-ebe ákwá" (ijo awon to sunkun ), Omume na nkuzi ndị a mere ka RCCG zụlite niche ahịa. Ọ ghọrọ, n'okwu otu n'ime ndị ụkọchukwu ya dị elu (onye bụzi onye otu Kansụl Na-achị Isi ya, ngalaba kacha elu nke ụka ahụ) "ụka agbụrụ" jupụtara na "ndị agadi, ndị na-agụghị akwụkwọ, ndị dara ogbenye" ​​ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị Ntinye Yoruba. Mgbe onye guzobere ya nwụrụ, RCCG nwere obere ọgbakọ iri atọ gbasasịrị na Lagos na ime obodo ndị ọzọ dị na Yoruba, ọnụ ọgụgụ mmadụ niile nọ na gburugburu otu narị ma ọ bụ obere.
RCCG nwere ntọala abụọ: na akụkọ ihe mere eme, ọ bụ Josiah Akindayomi (onye amụma na-agwọ ọrịa) chọtara ya ma weghachite ya site n'aka onye nọchiri ya, onye weghachiri usoro niile, nzukọ, nkuzi na mmemme nke ụka. Akindayomi bụ onye nkuzi na-eto eto nọ na mahadum, Enoch Adejare Adeboye, nke malitere n'ọchịchị na Jenụwarị 20, 1981 mgbe ọ lụsịrị ọgụ na ogologo ndu dị ilu na ndị okenye abụọ ọzọ toro eto. Ọchịchị ndị isi ahụ kewara chọọchị ahụ ụzọ atọ, nke ọ bụla n’ime ha na-edu ndú. RCCG gbara okirikiri mgbe mmadụ abụọ ndị ọzọ kpọnwụrụ oge. Amụrụ na Machị 2, 1942, afọ iri tupu amata RCCG, Adeboye sonyeere na Anglican Church na 1973. Ọ gụrụ akwụkwọ na Mahadum Ife (nke a na-akpọzi Obafemi Awoluwo University, OAU) site na 1964 rue 1967, ebe ọ nwetara akara ugo mmụta BSc na mgbakọ na mwepụ na 1967. Ọ nọrọ afọ ụfọdụ na Mahadum nke Nigeria, Nsukka, na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, tupu agha obodo Naịjirịa (1967-1970) mana ọ nweghị ike gụchaa akwụkwọ ya n'ihi esemokwu ahụ. Ọ laghachiri na Mahadum Lagos, ebe ọ nwetara, nke mbụ nzere Master of Science (MSc) na Applied Mathematics na 1969, na doctorate na akwụkwọ nyocha na hydrodynamics na 1975. O mechara kụzie ihe na Mahadum Lagos tupu oge ụfọdụ. ịbanye na Mahadum Ilorin (Ukah 2008; Bible-Davids, 2009; Faseke 2011). (N’ihi mmekọrịta chiri anya ya na sistemụ mahadum nke Naịjirịa, o nyegoro onye isi oche n’ihe gbasara mgbakọ na mwepụ na mahadum anọ dị na mba ahụ, ya bụ, Mahadum nke Ibadan, Mahadum Obafemi Awolowo, Ile-Ife, Mahadum Lagos, na Mahadum nke Nigeria, Nsukka.)
Ọ ghọrọ onye otu RCCG na 1973 mgbe nwunye ya, Folu Adeboye, sonyeere otu ahụ n'ihi ọchịchọ ọ na-achọ maka ngwọta ime mmụọ maka ụfọdụ nsogbu nsogbu dị adị. N'ịbụ onye kacha gụrụ akwụkwọ na chọọchị n'oge ahụ, ọ ghọrọ onye ntụgharị okwu / onye ntụgharị okwu maka onye nchoputa (site na Yoruba na Bekee) na aka nri ya nwoke ma ọ bụ onye nkwenye. O biliri n'ọkwa ngwa ngwa ma chie ya pastọ na 1977, naanị afọ ise ka ọ ghọrọ onye otu na-agaghị ụlọ akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ seminarị. Ya na Akindayomi nwere mmekọrịta na-enye aka na-egosipụta mmekọrịta ya na ya gosipụtara n'ụzọ doro anya mmasị ya maka ya karịa ndị ọzọ tozuru etozu maka iduzi ụka. Ọ gbara arụkwaghịm n'ọrụ ọkwa ya dị ka onye nkuzi dị elu na 1984, afọ atọ mgbe ọ rịgoro n'ọkwá kachasị elu nke ụka. Ọrụ nke ịgbanwe ọdịmma, nkuzi na omume emume nke RCCG dakwasịrị Adeboye bụ onye mechara rụgharịa aha ọma, gbasaa ma nwee ọganihu ụka. Na 1981 mgbe ọ malitere ịbụ onye isi ụka, a kọwara ya dị ka "ụka agbụrụ" nke ụmụ obere ụka iri atọ na itoolu nwere ihe ruru otu narị mmadụ; Otú ọ dị, na 2014 RCCG nwere ọgbakọ 32,036 ma ọ bụ alaka dị na mba 170, yana ndị nọ na ụwa zuru ọtụtụ nde. (Churchka na-ekwu na ha nwere nde mmadụ asaa n'Africa, ọnụ ọgụgụ nke siri ike nnwale iji tụlee nsogbu nke ọtụtụ njikọ ụka n'etiti ndị otu Kraist Pentikọstal.) Iji bido usoro ịdegharị aha, onye ndu ọhụrụ ahụ malitere ịga Annual Kenneth Hagin Sr. (1917-2003) ogige ndị ntorobịa na Tulsa, USA; A na-ahụkarị Hagin dị ka "nna" ma ọ bụ ọsụ ụzọ nke okwukwe ma ọ bụ Prosperity Gospel (McConnell 1987; Harrison 2005; Lee 2005: 99). Ọ gakwara Yoido Full Gospel Church nke David Yonggi Cho na South Korea, n'etiti ebe ndị ọzọ, ebe ọ webatara echiche na omume (dịka sel ụlọ) iji too ụka ma gbanwee n'ime na n'èzí. O kere ọgbakọ abụọ dị iche iche na mgbakwunye na ọgbakọ iri atọ na iteghete, agbụrụ dị iche iche o ketara. Ọgbakọ ochie ndị ọ kpọrọ "Classical Parishes" ụdị parish ọhụrụ ya abụọ ọ kpọrọ n'otu n'otu: "Model Parishes" (nke e kere n'afọ 1988) na "Unity Parishes" (nke emepụtara n'afọ 1997). Typesdị atọ a ka dị adị, nke ọ bụla na-akwado akụkụ dị iche iche nke RCCG ma ọ bụ ọnọdụ ime mmụọ nke Akindayomi. Na Septemba, 1988, Adeboye weghaara RCCG na ụlọ akwụkwọ mahadum site na ịtọ ntọala RCCG Campus Fellowships. Ọ kpọtara ndị na-eto eto, ndị gụrụ akwụkwọ, na-agagharị agagharị, ndị 1990s ghọrọ ndị agha ụkwụ nke ụka, na-ebu echiche ya gaa ebe ọrụ na ahịa na ebe ọ bụla ha gara. Ọ kwalitere ụka ahụ na ngwugwu mgbasa ozi (redio, telivishọn, kaseti na vidiyo, kọmpụta diski na DVD, mgbasa ozi telivishọn satellite, wdg.) , nke edere na 1990) ndi bara uba nke obodo, dika ndi isi ulo oru, na ndi ya na ndi ochichi dika ndi isi ala na ndi ochichi etiti. Ọ weghachitere ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị mkpa ma dị egwu na Nigeria, onye isi lara ezumike nká na-ahụ maka ụlọ ọrụ Nigeria Breweries plc, Felix Ohiwerei, ka ọ bụrụ onye isi ụka n'ahịa mmemme. Site na 1990s gaa n'ihu, RCCG ghọrọ ikpo okwu iji kpọsaa ngwa ahịa yana mkpọsa maka ọfịs ndọrọ ndọrọ ọchịchị (Ukah 2006). Companieslọ ọrụ mba dị iche iche na ndị na-emekọ ego dịka Guinness, Proctor & Gamble, Unilever, jikọrọ aka kwụọ ụgwọ mmemme ya na iji zụọ ahịa ngwaahịa na ọrụ ha n'oge mmemme ndị a.
Ebe ọ bụ na RCCG na-enwe ọhụụ na-edegharị oge oge, nkuzi ya na-agbanwe oge site na otu mesiri ike na nke ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ nzukọ Ndị Kraịst na-agbasa ozi ọma, eluigwe na ala nke nkwenkwe ya na-emetụta ma cosmovision Yoruba na Judeo-Christian worldview. RCCG bụ Christian na Yoruba n’otu oge; na ochichi, o choputaghi erughị ala ma ọ bụ emegiderịta onwe ha na nghọta abụọ a. Na mbido na 1952, ọ nakweere njirimara niile nke Aladura Christianity na nke ime mmụọ, dị ka nkwenye n'ọhụụ na nrọ dị ka ụzọ nke nkwukọrịta Chineke, ike nke ekpere iji weta ọgwụgwọ, amụma na prognostication, yana nrụpụta mmụọ nke ihe dị nsọ, dị ka mmiri doro anya, kandụl, ugwu ndị dị nsọ, osimiri na ebe. Na mgbakwunye, ụka malitere ọhụụ lebara anya na mkpa ime mmụọ nke ụmụ nwanyị, na-amara na nlekọta nke nwanyị dị oke mkpa maka ọganiihu ma ọ bụ na uzọ ọzọ nke ụlọ ọrụ okpukpe ọ bụla. Ka ụka ahụ malitere usoro nkwenye nke usoro site na mmekọrịta nkịtị na nke nkịtị na ntọala Pentikọstal, dị ka AFM nke South Africa, ọ ji nwayọọ nwayọọ malite ịwụsa njirimara Aladura ma n'otu oge ahụ na-egosipụta nkwupụta onwe onye Pentikọstal. Dịka ọmụmaatụ, Akindayomi kwụsịrị aha onye amụma (woli) (nke e ketara n'aka C&S) wee were aha "Reverend." N'otu aka ahụ, ọ kwụsịrị iyi uwe ogologo dị ọcha nke onye amụma na C&S wee bido ịwụ uwe na azụmaahịa na okpu. Ka ọ na-erule afọ 1970, isi okwu chọọchị nke Pentikọstal fọrọ nke nta ka ọ gwụ, ya na nnukwu nrụgide banyere mkpa ime mmụọ ụmụ nwanyị.
N'afọ 2005, ndị ndu RCCG kwuputara ihe ọ gbasoro kemgbe “Ọhụụ na Nkwupụta Ozi.” Na
Isi ihe mere iji mee ka isi ihe ndị a pụta ìhè bụ na, n'ime ọtụtụ afọ iri atọ gara aga nke akụkọ RCCG, usoro nkwenkwe nke ụka ejiriwo ịdị nsọ gaa n'ọganihu ruo ọrụ ebube nye ikike akụ na ụba na itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke egosiri mba. Ọ bụ ezie na a na-akpọkarị ya “Nkwupụta RCCG / Nkwupụta Ozi” (na nke dị iche), nke a bụ usoro okwu isii, nwere njikọta ahaziri nke edobere iji gosipụta nkwenkwe nke ụka na oge mgbasawanye ya kachasị na nkwenkwe nkuzi ma ọ bụ nghazi. Nkwupụta ndị a bụ ndị a:
?? Ime eluigwe
?? Ime ka ọtụtụ mmadụ soro anyị
?? Inwe onye otu RCCG n'ime ezinụlọ niile nke mba niile
?? Iji mezuo nke 1, ịdị nsọ ga-abụ ụdị ndụ anyị
?? Iji mezuo Nos.2 na 3 dị n'elu, anyị ga-akụ ụka n'ime nkeji ise ije ije n'ime obodo na obodo ọ bụla nke mba ndị ka na-emepe emepe na n'ime nkeji ise ịkwọ ụgbọala n'obodo na obodo nke mba ndị mepere emepe.
RCCG na-ekwusi ike na nkwenkwe ya ndị bụ isi sitere na Bible. Akwụkwọ Nsọ bụ iwu nke ụka na ọgbụgba okwukwe; adighi-agha agha, nke ekpughere ma site n'ike nke Mo Nso. Chọọchị kwenyere na Atọ n'Ime Otu (Chineke Nna dị ka Onye Okike; Chineke Ọkpara dị ka Onye Mgbapụta nke ụmụ mmadụ, na Chineke Mmụọ Nsọ dị ka onye na-eme ka ụmụ mmadụ dị ọcha) na ike nke Mmụọ Nsọ iji rụọ ọrụ ebube n'oge a. Nkwenye na ọrụ ebube nke mgbapụta, nke ọgwụgwọ (ya bụ, ịgwọ ọrịa na-enweghị ọgwụ) na akụnụba kachasị na nkuzi ya. Chọọchị ahụ kwenyere na ụdị baptism atọ: baptism nke mmiri, baptism nke Atọ n'Ime Otu na baptism nke Mmụọ Nsọ. Ọzọkwa, ụka kwenyere n'ike nke ekpere, nchegharị, na iweghachi dị ka ihe ịrịba ama nke nchegharị. Omenala amụma gbara ọsọ na akụkọ ntolite, nkwenkwe na omume nke RCCG; onye ndu n’onwe ya n’enye onwe ya ihe nlere dika onye n’echeputa okwu Chineke n’etiti ndi kwere ekwe, tinyere ndi ndoro ndoro ochichi ya na ndi mmadu no n’ime obodo. Ozizi Apocalyptic na nke eschatological, dị ka nkwenkwe n'ọchịchị otu puku afọ nke Kraịst, mkpagbu na-abịanụ iji bute Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ nke Kraịst, ntaramahụhụ ebighi ebi (nke dị na hel nke sọlfọ na-ere ọkụ) na-eso ikpe ikpeazụ (nke nwere ụdị atọ: nke ndị kwere ekwe , nke mba dị iche iche, na ndị na-ekweghị ekwe) na ntoputa nke igwe ohuru na uwa ohu bu uzo di iche nke ozizi ndi a ma ama na RCCG. Setan, ekwensu, ndi mmuo ojoo, ndi amoosu na otutu ndi ozo ojoo na ndi ojoo ojoo di na RCCG dika Mo Nso na ike nke onye ndu ya iweputa oru ebube. Chọọchị kwenyere n'alụmdi na nwunye di na nwunye; ịgba alụkwaghịm ga-ekwe omume n’ihe banyere ịkwa iko; ịlụgharị di ma ọ bụ nwunye ma ọ gbaa alụkwaghịm ga-ekwe omume naanị mgbe onye nke gbara alụkwaghịm nwụrụ. Chọọchị ahụ na-akụzi na Onye Kraịst raara onwe ya nye ekwesịghị iyi uwe nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya, ma ọ bụ egwuregwu, ma ọ bụ jiri njakịrị nzuzu, ma ọ bụ banye n'ụgwọ na-enweghị isi. Onye raara onwe ya nye nke Kraist nwuru n’ime Kraist, ya na uwa a, ya mere, wezuga ihe nke uwa n’ife ndi nwuru anwu. Ife ndị nwụrụ anwụ ofufe pụtara ịgbaso ọdịnala ma ọ bụ ibi ndụ ọdịnala. A ga-arara ụmụaka nye na chọọchị n’ụbọchị nke asatọ mgbe amụrụ ha, na Sọnde bụ ụbọchị dị nsọ akọwapụtara dịka ụbọchị nke Onyenwe anyị na ụbọchị mbụ n’izu. A ga-erubere ndị isi ụka na ndị nọ n’ọchịchị n’ime mmụọ n’ihe niile dịka uche Chineke, ebe nnupụisi megide ndị ụkọchukwu ụka bụ nnupụisi megide uche Chineke.
Akụkọ ihe mere eme nke RCCG bụ ihe atụ kachasị dị ịrịba ama nke usoro nụgharịgharị okpukpe dị ka atụmatụ asọmpi dị irè na Nigeria. Ntinye aka nke nchikota ndi mmadu adighi ejedebe na uzo nke ichoputa ozizi ohuru banyere ikike nke okpukperechi iji meputa aku na uba na aka ma meputa emume ohuru na omume aku na uba ndi mmadu nke mebiri oke di n'etiti okpukpe na aku na uba ma obu ochichi. Dika nkuzi ya, emume RCCG bu ihe ndi ozo, site na oru okpukpe nke ana eme na nzuko uka kwa izu na nke a na-eme na mba n’onwa obula ma obu kwa afo. A na-eme ememme okpukpe kwa ọnwa na kwa afọ na Ogige Mgbapụta sara mbara, ala ekpere nke ji nwayọ nwayọ nwayọ na-abanye n'obodo izizi nke okpukpe na Nigeria (karịa na nke a n'okpuru). E nwekwara emume ndị a na-emechi emechi ma bupụ site n'isi ụlọ ọrụ ya na Nigeria gaa mpaghara mpaghara ndị ọzọ dịka London, Amsterdam, New York ma ọ bụ Berlin.
Sọnde bụ ụbọchị dị nsọ maka ụka ahụ mgbe a na-eme emume mmemme ya kachasị mkpa kwa izu. Ọrụ a, nke na-ewe ihe dị ka awa abụọ na atọ, bụ nke otuto na ofufe ofufe, okwuchukwu nke ịhọrọ ụkọchụkwụ ụkọchukwu, ikpe ekpere na ikpere. Dabere na ụkọchukwu na mkpa nke ụka, enwere ike ịnakọta ego karịa otu oge, oge ụfọdụ ugboro anọ n'otu ihe. A na-arara Tuesday ụbọchị ọmụmụ ihe ọmụmụ a na-akpọ "Igwu Ala miri emi;" mgbe Thursday bụ maka ọrụ mgbapụta pụrụ iche a na-akpọ “Faith Clinic.” Mmemme abụọ ahụ na-eme ná mgbede mgbede iji mee ka ndị ọrụ nwee ike ịbịa. "Ka-A-Azụ Fishing" bụ mmemme ịgbasa oziọma a na-eme n'izu Ista na ekeresimesi. RCCG anaghị eme emume Ista ma ọ bụ Krismas n'echiche nke ọdịnala Ndị Kraịst mana ọ na-arara oge ndị a nye "mmeri mkpụrụ obi" nye Kraist ma ọ bụ ndị ntụgharị.
Ka ọ dị ugbu a mmemme emume kachasị ewu ewu na RCCG bụ Ọrụ Mmụọ Nsọ (HGS), nke izizi emere na Machị, 1986 wee mee ya Friday ọ bụla ikpeazụ nke ọnwa. Onye isi ụka ahụ na-egosi na nhọpụta nke Fraịde ikpeazụ nke ọnwa bụ ihe si n’ike mmụọ nsọ Chineke; Agbanyeghị, ọ bụkwa ikpe na ngwụcha izu a bụkwa oge a na-akwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ na Naijiria maka ndị ọrụ na ndị ọrụ, na-eme ka ọ bụrụ oge kachasị mma maka ego nke ọnwa maka ụka iji rịọ otu ụzọ n'ụzọ iri na nchịkọta ego ndị ọzọ site na ya nnukwu klientele. Ọ bụ ihe omume nche abalị nke na-amalite mgbe anyanwụ dara na Fraịde ruo obere awa nke Satọde, na ndị bịara HGS sitere na 200,000 ruo 500,000. (Mgbasa ozi ụka mgbe ụfọdụ na-azọrọ na e nwere otu nde ma ọ bụ karịa ndị bịara ya, mana nke a agaghị ekwe omume n'ụzọ anụ ahụ n'ihi na enwere O nweghi ebe obula na Nigeria nke nwere ikike nke nnabata mmadu nde mmadu n’otu oge.) N’ihi na amuru onye ndu ugbua nke RCCG n’ime onwa Mach, na March HGS nile ka akpadoro “Puru iche” ma noo n’otu izu karia abali na abali. dị ka ndị ọzọ nke afọ mere. Ewu ewu nke HGS emeela ka ebupụ ya na mba ndị ọzọ na ụlọ akwụkwọ mahadum, ebe a na-akpọ ya "Campus Holy Ghost Service." Na-esochi usoro nke HGS, ma na-abanye n'ime ewu ewu ya, bụ Holy Ghost Congress (HGC), nke bụ ụdị HGS kwa afọ. Na mbụ akpọrọ Holy Ghost Festival, emume izizi nke HGC bụ nke emere na Disemba, 1998. Na mbụ, ọ bụ mmemme nke otu abalị, mana enwegoro ya kemgbe otu izu ọrụ. Mgbe ụfọdụ akụkọ RCCG na-ekwupụta onwe ya na-ekwu na ịga HGC bụ ọgbakọ okpukpe kachasị ukwuu n'ụwa; Otú ọ dị, nsọpụrụ a bụ Maha Kumbh Mela, njem uka ndị Hindu na-aga n'obodo Allahabad nke dị n'ebe ugwu India. Njem a na-agụnye ihe karịrị kilomita iri ise na asatọ, ọ gụnyere ihe karịrị nde ndị njem ala nsọ iri anọ. Ihe omume kachasị mkpa nke ụka a na-eme kwa afọ bụ Mgbakọ Mba ya, oge maka ndị isi na ndị otu ya ka ha zukọta, kerịta otu ọhụụ, ma mee atụmatụ maka ọrụ afọ na-eso. Nzukọ a na-enwe kwa afọ na-ewere ọnọdụ na etiti Ọgọstụ wee dị otu izu. Nzute Chineke bụ ihe omume ememme nke ezubere iji gboo mkpa ụmụ nwanyị maka ụmụaka. Emere ya na Mọnde mbụ (ụtụtụ) nke ọnwa ọ bụla, maka otu awa. E nwekwara Nzukọ Ndị Ozi a na-eme ugboro abụọ n'afọ (Mee na Ọgọstụ) mgbe ndị ụkọchukwu nke ụka na-agbakọta iji tụlee ndụ ụka na ịdọ aka na ntị ma mee onwe ha ume. N'iburu n'uche ọtụtụ ihe omume agbasa na kalenda, ọ dị mma ịkọwa na RCCG bụ okpukpe na-eme ihe ike na-achọ oge dị ukwuu, ntinye, ume na ego n'aka ndị otu ya na ndị na-elekọta ya.
RCCG bidoro dị ka ndị otu mmadụ iri na abụọ na ndị isi na akụ ime mmụọ nke onye amụma na-enupụ isi nke C&S. Agbanyeghị, ka ụka ahụ gbasaa, ọ na-arụzigharị ma dozigharị ndị ndu ya ka ọ bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọ bụ naanị nwoke na-achịkwa ya na onye na-elekọta ya. Ọchịchị, ụka kwuru na Mmụọ Nsọ bụ onye ndu ya; otu o sila dị, ọ bụ ndị ndu bụ mmadụ na-eme ihe e nyere ikike dị nsọ. N'elu pyramid nke ikike bụ General Overseer (GO), Enoch A. Adeboye, onye okwu ya bụ iwu nwere nkwado Chineke. (A na-akpọ GO nke ọma “Papa GO,” a na-akpọkwa ndị ozuzu aturu niile “Papa” ma ọ bụ “Mama,” dabere na okike ha, site n’aka ndị ọgbakọ ha.) The GO na-ejide ụlọ ọrụ maka ndụ ebe ndị pastọ ndị ọzọ niile (ma e wezụga Mummy GO ) ga-ezumike nká mgbe ọ dị afọ iri asaa. Na ụkpụrụ, Otu na-achị isi nke ụka bụ nke ọzọ dị ike na chọọchị; na omume, Otú ọ dị, ọ bụ nwunye nke GO, Oriakụ Foul Adeboye, onye na-aga aha aha "nne na-Israel" (ma ọ bụ aha ụtọ nke mummy GO). Dịka akara nke ịkwanyere ịbụisi ugwu yana ịkwanyere ọchịchị ugwu, ndị ụkọchukwu niile nke ụka chọrọ ya. Ndị mejupụtara verntù Na-achị Isi nwere mmadụ iri na asatọ dị elu, ndị ụkọchukwu nọtere aka. Onwere office nke osote onye isi General hiwere na 1981; a gbanwere aha ọfịs ahụ ịbụ “Onye Nlekọta Ọchịagha General: na 1997. Na 2002, ọfịs isii nke Assistant General Oversers mepụtara ma mejupụta ya site n’aka ndị ụkọchukwu kacha elu. Chọọchị nwere otu "Ndị Nlekọta Pụrụ Iche na General Overseer" (SATGOs), ọnụ ọgụgụ ha dịgasị iche site n'oge ruo n'oge. N'otu oge e nwere nanị otu SATGOs, mana na 2014 ọnụ ọgụgụ ahụ mụbara ruo iri na iteghete; mgbakwunye asaa ndị ọhụrụ bụ ndị na-ahụ maka mpaghara na-ahụ maka mpaghara RCCG Global: North America, South America, United Kingdom, Europe, Northern Africa, Southern Africa, na Middle East / Asia. Agbanyeghị na ike mmụọ, njikwa na akụnụba gbadoro anya na onye na ụlọ ọrụ nke GO, mmụba nke kansụl na-achị achị na-egosi esemokwu dị n'etiti ọchịchọ nke monopolize charisma site na itinye ya na otu onye (GO) na n'otu ebe (Ogige Mgbapụta) na mmụba nke ndị ozi ala ọzọ nke ụka na nchịkọta mkpokọta na usoro mkpebi nke ụka. Enwekwara ngalaba nhazi ọhụrụ, nke akpọrọ World Advisory Council (WAC), nke na-ezukọ na Disemba ọ bụla n'oge HGC. Dị ka aha ya na-egosi, ọrụ ya bụ inye ndụmọdụ kansụl na-achị achị ndụmọdụ ma bulie atụmatụ maka ntụle ya. WAC bụ ndị otu na ndị nọ ugbu a nke kansụl na-achị achị na ndị niile na-enyere aka na GO.
Ngalaba nchịkwa kacha nta na RCCG bụ "Fellowlọ Mmekọrịta," otu nke mejupụtara parish. Otu parish nke RCCG nwere ike ịbụ obere ka mmadụ asaa ma ọ bụ buru ibu dị ka ọtụtụ puku. Dị ka iwu, ọtụtụ dị obere. Ọtụtụ ndị ngwuro no n'agbata mejupụtara "Mpaghara," ebe ụfọdụ "Areas" na-etolite "Mpaghara." Iji nwee mgbagwoju anya na ike na-arị elu, otu "Mpaghara" mejupụtara "Mpaghara," ebe otu mpaghara "mpaghara" mebere "Mpaghara." Onye ọ bụla na-eduzi ma na-achịkwa onye pastọ (nke a na-akpọ "pastọ-na-elekọta parish / mpaghara / mpaghara / mpaghara / mpaghara") onye nọ n'okpuru na aza ajụjụ maka onye ọrụ dị n'elu ya. N’ihe dị ka etiti afọ 2014, e nwere mpaghara iri abụọ na asatọ na Naịjirịa na ihe karịrị puku ndị parish iri abụọ.
RCCG doro anya bụ nzukọ okpukpe kacha baa ọgaranya na Nigeria. Iji mee nke a n'echiche nke akụkọ ntolite, na 1981 ụka enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọnwa ndị ọrụ ya nke na-erughị N 300 mana ha nwere ike itinye nde N 300 na mmemme ụbọchị na 1999 wee nwee ego ruru nde US dollar iri abụọ (N 4b) Gulfstream 4XP jet maka onye ndu ya na 2009. Ọ bụ otu onye nwe ụlọ nke onwe ya na mba ahụ. RCCG nwekwara saịtị okpukpe kachasị ukwuu, Ogige Mgbapụta, na Nigeria. Na 2012, o ruru ihe karịrị hekta 1,540, mmụba dị ukwuu site na hectare 770 na 2010. Ogige Mgbapụta ahụ bụ oghere anụ ahụ kachasị ukwuu a raara nye okpukpe n'Africa. Chọọchị gbasiri ike na-agbasawanye ala ya iji kwado ọhụụ ya nke iwu obodo Chineke nke ga-adị ka mba ndị ọzọ na Nigeria. Ihe malitere dị ka ogige ekpere na 1983 (nke dị naanị 14.25 acres) gụnyere ihe karịrị ụlọ 2,500 dị iche iche (956 nke bụ bungalows na 562 bụ duplexes, iri na ise bụ ụlọ okpukpe raara onwe ha nye, 336 bụ ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ ụlọ mbikọ ma ọ bụ ụlọ obibi, 184 bụ ụlọ ọrụ na 170 bụ ụlọ ndị a na-arụbeghị arụ ka na-ewu ewu). Ogige Mgbapụta ahụ nwere ọnụ ọgụgụ nke ihe dị ka 20,000, ọ bụkwa saịtị nke mita 750 site na ụlọ mgbakọ 1,000 mita. O nwekwara ụlọ ụka mahadum (Mahadum Redeemer), nne, na ụlọ akụ ise, n'etiti usoro ndị ọzọ. Ogige ahụ na-ejide onwe ya: ọ na-enye ihe dị ka lita 8,800,000 nke mmiri kwa ụbọchị maka ndị bi na ya na 10.4 megawatts nke ọkụ eletrik site na turbines abụọ gas wuru na 2010. E kewara ogige ahụ n'ime mpaghara iri abụọ na abụọ, nwere ihe karịrị ụlọ itoolu ebe obibi maka onye-nwe. Site na iwu ụka, naanị ndị ụka kwere ka ha zụta ụlọ obibi wee biri n'ime mgbidi Ogige ahụ (Ukah 2014). Ihe dị ka pasent iri anọ nke ụlọ obibi ebe obibi na-arụ ma nwekwaa ya kpamkpam. Ndị ọzọ fọdụrụ ma nwekwaa ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na ụlọ nke ụka na-eresị ndị otu ha tozuru oke. Ọnụ ego nke nkeji ndị ahụ sitere na N12.5 nde (€ 63.500) maka ụlọ ime ụlọ atọ na N18.5million (€ 93,900) maka ụlọ ime ụlọ atọ. Ime ụlọ ime ụlọ atọ, nke nwere ọkara na-aga Nari nde 10 (€ 47,970); a na-ere ụlọ ime ụlọ abụọ nke nwere ọnụ-ụlọ na-erughị nde naịra asaa (€ 7); a na-ere otu ọnụ ụlọ nke nwere ọnụ-ụlọ na-akwụ ụgwọ na nde naira 33,579 (€ 4). Dika uka na-agbasawanye na ndi otu ya, ya mere o na-agbanwe odida obodo mepere emepe dika ihe akaebe nye ike na ikike na ikike ya. Site na ụka nke ịdị nsọ, RCCG ji nwayọọ nwayọọ gbanwee ka ọ bụrụ ụka ụka, tinye nnukwu ego na ahịa akụ na ụba nke Nigeria na ngwongwo ngwongwo, ọbụlagodi mgbe edemede mbụ nke nkwenkwe ya bụ "Iji mee eluigwe" (Ukah 19,188).
RCCG na-eche ọtụtụ ihe ọtụtụ otu "ihe ịga nke ọma" na-eche ihu: nsogbu nke ndị na-agba ọsọ n'efu. Ọtụtụ mmadụ na-esonye na ụka iji ghọrọ mkpụrụ nke ihe ịga nke ọma ma ọ bụ zoo akụ na ụba ha enwetara ma ọ bụ jikọtara ya na akụkọ banyere nzukọ na-aga nke ọma. N'otu aka ahụ, chọọchị adọtala ọtụtụ ndị bara ọgaranya bụ ndị na-etinye akụkụ nke akụ na ụba ha iji kwado ọrụ ụka ma chọọ nlekọta pụrụ iche. Ndị isi ụka na-enye ndị ọgaranya a ọgwụgwọ pụrụ iche ha chọrọ, maka iwe nke ndị otu nọ ogologo oge mana ndị ogbenye bụ ndị a na-eleghara anya ma ọ bụ weghachite na ndabere. Achọgharịrị ịdị nsọ na usoro ego: ịnweta ego ma ọ bụ bara ọgaranya n'onwe ya bụ ihe ịrịba ama nke ezi omume na nnwapụta Chineke, nke na-achọghị nkọwa ọzọ (Ukah 2011). Chọọchị na-echekwa echiche nke onwe ya ihu: ọ bụ nzukọ jụrụ okwu nke na-agọnahụ ọrụ ụwa dịka ndị agha ma ọ bụ azụmaahịa na-adịghị mma, dị ka ụtaba na ị alcoholụ mmanya na ịzụ ahịa, mana ọ dị ugbu a na nnukwu azụmaahịa n'agbanyeghị agbanyeghị ihe ha na eme na iweputa na ire ahia. N'otu aka ahụ, ụka bụ ebe mgbaba nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị dị ike, na-enyo enyo na ndị na-eme omume rụrụ arụ bụ ndị a na-ahụta dị ka ndị isi na-elekọta nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ego nke Nigeria. Enwekwara esemokwu pụtara ìhè n'etiti chọọchị zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ ịrịọ ike ya na omume Yoruba gbanyesiri mkpọrọgwụ ike. Nke a pụtara ìhè n'ememe dị iche iche na nhazi nke ndị ndu ya, pasent iri itoolu n'ime ha bụ ndị Yoruba amịpụtara. Ọzọkwa, maka ọtụtụ òtù ndị Pentikọstal nke Nigeria, oge mgbanwe onye ndu bụ oge nsogbu dị egwu; RCCG lanarịrị otu nsogbu dị otú ahụ na 1980/1981. Oge mgbanwe ọzọ na-eru nso n'ọgbọ nke onye ndu ya ugbu a. Ọtụtụ ndị chọrọ ịzọ ọchịchị, gụnyere ụfọdụ ndị otu ụmụ Akindayomi, na-apụta ma na-azọ ọkwá ndị dị mma iji sọọ mpi maka ike na ikike. Lụ ọgụ maka isi RCCG abụghị naanị maka iduga mmụọ ma ọ bụ okpukperechi; ọ bụ n'ụzọ nkịtị na usoro bara uru iji nwee ike ịchịkwa nnukwu nzukọ akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na alaeze nke sitere na West Coast of Africa ruo n'akụkụ Australia, New Zealand, Canada na China. N’inwe nnukwu akụ na ụba ya, o doro anya na ọnọdụ idu ndú n’ọgbakọ dị mma ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Agbanyeghị, ka ndị Naịjirịa na-etolite ma na-ahazi ya, otu ahụkwa ka RCCG na-atụ anya ịkwado ọpụpụ ya nke ụwa, akụnụba ya na ike ya, nsogbu ndị a n'agbanyeghị
Adeboye, Olufunke. 2007. "'Arrowhead' nke Nigerian Pentikọstalism: The Redeemed Christian Church of God, 1952-2005." Pneuma 29: 24-58.
Ayegboyin, Deji na S. Ademola Ishola. 1997. Churchesmụ ụka ụmụ amaala Africa: Ọhụụ nke akụkọ ihe mere eme. Lagos: Akwụkwọ kachasị elu.
Bible-Davids, Rebecca. 2009. Enoch Adeboye: Nna nke Mba. London: Biblios Ndị Bipụtara.
Faseke, Modupeolu, ed. 2011. Enoch Adejare Adeboye @ 70: Akụkọ Na-akpata Ebube, Lagos: CIBN Press Ltd.
Harrison, Milmon F. 2005. Akụ Na-ezighi ezi: Okwu Okpukpe nke Okpukpe na Contemporary American Religion. New York: Oxford University Press.
Hegelsson, Kristina. 2006. " Ije Ije na Mmụọ Nsọ ”: Mgbagwoju Anya nke innọ na Chọọchị Pentikọstal Abụọ na Durban, South Africa. Uppsala: DICA.
Lee, Shayne. 2005. TD Jakes: Onye Nkwusa Ọhụrụ nke America. New York: New York University Press.
McConnell, DR 1987. Oziọma Dị Iche: A Historical and Bibical Analysis of Modern Faith Movement. Peabody, MA: Hendrickson Publishers.
Miller, Kent D. 2002. “Atụmatụ asọmpi nke Organitù Okpukpe.” Akwụkwọ Management Strategic 23: 435-56.
Olaleru, Olanike. 2007. Mkpụrụ Ala: Akụkọ banyere Ntọala nke Nzukọ Ndị Kraịst a gbaghaara nke Chineke. Lagos: Nna nke Light Publications.
Omoyajowo, Akinyele J. 1982. Cherubim na Seraphim: Akụkọ banyere otu Churchlọ Nzukọ nke Africa. New York: Nok Publishers International.
Uka, Asonzeh. 2003. Rlọ Nzukọ Kraịst nke Chineke (RCCG), Nigeria . Ihe omuma obodo na usoro uwa na Pentikọstalism nke Africa. Akwụkwọ nyocha PhD, Mahadum nke Bayreuth, Germany.
Ukah, Asonzeh. 2014. “edegbapụta oghere obodo: Ambivalence nke iwulite obodo Pentikọstal na Lagos. Pp. 178-97 mu Ekpere Globalwa niile gosipụtara ọhụụ nke okpukpe na obodo, ”Nke Jochen Becker, Katrin Klingan, Stephan Lanz, na Kathrin Wildner dezigharịrị. Zurich: Ndị mbipụta Lars Műller.
Ukah, Asonzeh. 2011. "Chineke Unlimited: Mgbanwe nke akụ na ụba nke Pentikọstal nke Nigerian oge a." Pp. 187-216 na Economics of Religion: Ihe omumu banyere uzo mmadu , nke Lionel Obadia na Donald C. Wood dere. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
Uka, Asonzeh. 2008. Ihe ngosi ohuru nke ike Pentikostal: Ihe omumu nke nzuko nke ndi Christian nke Chineke na Nigeria. Lawrenceville, NJ: Africa World Press.
Ukah, Asonzeh. 2006. "Brandmepụta Chineke: Mgbasa Ozi na Industrylọ Ọrụ Pentikọstal na Nigeria." Liwuram Journal nke ndi mmadu 13: 83-106.
Uka, Asonzeh. 2004. "Pentikọstal, Mgbasa Okpukpe na Obodo: Ihe Mmụta sitere na Belt Bible Nigeria." Pp. 415-41 n'ime n'etiti Nguzogide na Mgbasawanye: Nyocha nke Mkpa Obodo na Africa, Nke Peter Probst na Gerd Spittler dere. Münster, Germany: Lit Verlag.